Sina natetika kofehy ho an'ny mpanamboatra thermoplastika sy mpamatsy | Beihai Fiberglass
1.Miorina amin'ny mpandraharaha fampiraisana silane ary famolavolana sizika manokana, mifanaraka amin'ny PA, PBT / PET, PP, AS / ABS, PC, PPS / PPO, POM, LCP.
2. Ampiasao tsara ho an'ny fiara, kojakojan-trano, valve, trano fonenana, fanoherana ny harafesina simika ary fitaovana fanatanjahan-tena.
Ny kofehy voatetika ho an'ny thermoplastic dia mifototra amin'ny mpandraharaha fampiraisana silana ary famolavolana habe manokana, mifanaraka amin'ny PA, PBT / PET, PP, AS / ABS, PC, PPS / PPO, POM, LCP.
E-Glass voatetika mijoro ho an'ny thermoplastic dia fantatra amin'ny fahamendrehana tsara indrindra amin'ny strand, ny fivezivezena ary ny fanodinana ambony, manome fananana mekanika tena tsara sy avo lenta amin'ny vokatra vita.
1. Agent mpitsoa-ponenana monina any Sileana izay manome ny haben'ny haben'ny lanjany.
2.Ny formaulation habe miavaka izay manome fifamatorana tsara eo anelanelan'ny kofehy voatetika sy ny resina matrix
3. Fahamarinana tena tsara sy fivezivezena maina, fahaizan'ny bobongolo tsara ary fanaparitahana
4. Toetra mekanika tsara sy toetran'ny vokatra mitambatra
Fomba fanodinana sy tsindrona
Ny fanamafisana (kofehy voatetika voatetika) sy ny resina thermoplastic dia mifangaro ao anaty extruder. Aorian'ny fampangatsiahana dia atsofoka ao anaty pellets thermoplatic mihamafy. Ny pellets dia alefa ao anaty masinina manamboatra tsindrona mba hamorona faritra vita.
E-Glass voatetika kofehy ho an'ny thermoplastics no tena ampiasaina amin'ny fizotran'ny tsindrona sy ny famatrarana ary ny fampiharana fampiasa mahazatra dia misy ny fiara, kojakoja ao an-trano, valves, trano fonenan-tsolika, fanoherana ny harafesina simika ary fitaovana fanatanjahan-tena.
Fanoherana ny hydrolisis, famirapiratanana tena tsara
Teo aloha: Tady voatetika lena
Tady voatetika ho an'i Pa
Tady voatetika ho an'ny Pa6
Tady voatetika ho an'i Pp